Ndiani "Oscar", kana nhoroondo yemukurumbira statuette
Iyo inozivikanwa Oscar statuette ine yakapfuma nhoroondo yakazadzwa nengano uye runyerekupe. Pamberi pako - iyo inopokana uye inoshamisa nyaya yemukurumbira firimu mibairo. Mubairo wekutanga munhoroondo unogona kuenda kumbwa.
Wese munhu kamwechete muhupenyu hwake akatarisana nemasimba majeure mamiriro akasangana nekurasikirwa kwenguva pfupi kwekugona kuona. Izvi zvinokonzerwa nezvinhu uye kudzimwa kwemagetsi. Fungidzira kuti kune dutu munzvimbo yako iyo ...
Ehe, hofori, anoteura ropa uye chena chena whale Moby Dick kubva mungano naHerman Melville yaive yekunyepedzera kwekunyepedzera kwekupedzisira kweAmerican kudanana. Nekudaro, sekugara, chokwadi chaicho chakava kurudziro yengano. Ngano kana ...
Vanhu vanogara vachitaura nezvekuti havagone kurarama vasina kapu yemangwanani yekofi. Nekudaro, zvachose hapana munhu anoti iyo imwechete mukombe wekofi unomuka kwete iwe chete, ...
Pfungwa dzevanhu dzinokwanisa kugamuchira chero chinhu kunze kwenjodzi hosha. Hapana munhu anogona kutungamira hupenyu husina kurongeka zvizere huzere nenyonganiso. Ehe, iro kamuri remuchiri kuyaruka rinogona kutaridzika ...
Dementia inopfuura kungoita kurasikirwa ndangariro. Saka unoziva sei chirwere munguva? Uye dementia chii? Muchokwadi, hachisi kana chirwere. Tinogona kutaura kuti izvi ...
Nyowani wekuAmerican stealth muparadzi: masimba uye kushaya simba
Inotaridzika sedare uye inoita kunge isinganzwisisike pane kutyisidzira, asi vavaki vengarava veGeneral Dynamics kambani, vakagadzira kuBath Iron Works muMaine, ichi chishamiso chehunyanzvi, vanovimbisa ...
Wese munhu akanzwa nezvechikepe chinonzi Flying Dutchman, ngarava yemweya inozivikanwa kwazvo pasi rose. Zvisinei, iri kure kune iyo chete. Mudzimu wechikepe chakambonyura inyaya yakakurumbira, ...
Mumwe murume anobva kuIndia akapinda muBhuku reGuinness reRekodi asina kana chaamboita zvachose. Haana kudya huwandu hwakawanda hwembwa dzinopisa, kana kusvetuka kubva padenga reimba. Zvese izvo iye ...
Kuzvivimba ndechimwe chezvipo zvikuru vabereki zvavanogona kupa vana vavo. Naizvozvo, kunyanya kukoshesa kunofanira kubhadharwa kumagazini ino. Sekureva kwevepfungwa, kwete kuzvivimba zvakakwana ...
Akazvarwa makore makumi maviri nemashanu apfuura, asi nhamo yekurasikirwa kwekunzwa ichiri kufadza vanoda mimhanzi. Chakavanzika chekuzvarwa kwaBeethoven Kunyangwe mushure memazana emakore, pane chakavanzika chikuru nezve hupenyu hwaLudwig ...
Hazvina musoro kutenda kuti kana mutambi mufirimu achitamba munhu akadhakwa, saka akanyatsotora sip asati atora. Nyanzvi yekuita mabasa inogonesa muoni kuti pamberi pavo paine munhu anoteura ropa, kana ...
Vose vakuru nevana vanoda ma dolphin. Izvi zvipuka zvinoita kunge zvine hungwaru, uye zvichitove nemhedzisiro yekurapa nazvo! Dzidza zvinhu gumi zvinonakidza nezvavo. Kune marudzi anopfuura makumi matatu ema dolphin .. Ma dolphin ...
Iyi ndiyo tsamba amai vese vangade kunyora vasingakwanise kutsanangura nemazwi zvimwe zvinorwadza chokwadi. Asi ivo vanofanirwa kuratidzirwa imwe nguva, uye zvirinani kunonoka kupfuura kusati kwamboitika. Sei zvese zvakatanga? Nhasi…
Dzimwe nguva hatinzwisise vanhu vakatikomberedza uye toedza nepatinogona napo kuvachengeta, kunyangwe isu tisingapi zvakafanana mukudzoka. Pane dzimwe nguva apo patinoona izvo maficha izvo pa ...
Apple yakagadzira 3D Kubata tekinoroji kune yakanyanya kunzwisisana mafoni kusangana nemuridzi. Nekudaro, pakuratidzwa kweiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus hapana kana izwi rakataurwa nezve ...
Vatyairi vazhinji vanoisa zvitambi pamotokari dzavo zvinogona kufananidzira chero chinhu. Dzimwe nguva zvitambi izvi zvinouya zvakananga kubva kune anogadzira, asi chero zvakadaro, unogona kuda chimwe chinhu seichi ...
Mbizi dziri pakati pezvisikwa zvakanaka kwazvo zvinogara muAfrica. Vanhu vanoziva mitsara yavo inozivikanwa pamuviri uye havagone kugadzirisa mubvunzo nenzira ipi neipi: vachena here nemitsetse mitema kana iri ...
Kubviswa kwe "Antonov", kana Kupera kweUkraine ndege indasitiri
Chirevo chehurumende chaNdira 26 chakabvumidza kudzimiswa kwechinetso chekuvaka ndege dzeAntonov Gwaro iri rakaodza moyo vagari vazhinji veUkraine nenzvimbo yese yapashure peSoviet, kunyangwe paine tsananguro dzakawanda ...
Pane mazano asingagumi ezvekuti nei vasikana vakazvimiririra, vakabudirira uye vakanaka kazhinji kazhinji vasina kuroora. Kunge zvakavanzika zvakawanda muhupenyu hwedu, hapana mhinduro imwechete kune ino futi. Kazhinji ...
Mibvunzo ye50 mu database yakagadzirwa mu 0,599 masekondi.